उत्कृष्ट १०० उत्प्रेरक भनाईहरू जसले तपाईकाे जीवनमा बदलाव ल्याउन सक्छ - नेपाल दृष्टि
१०० प्रेरक भनाईहरु…
एक विचार जसले तपाईको जीवन वदल्न सक्छ
1) ‘रिस’को उल्टो ‘सरी’ पनि हुन्छ । कहिलेकाही उल्टो बोल्दा नि फाइदा हुन्छ । 2) मेरो एउटा पनि सत्रु छैन, सत्रु देख्यो कि मैले सिध्याइहाल्छु.. … उसलाई साथी बनाएर । 3) शहर र गाउँमा दुई फरक छन ।(i). शहरमा घरहरू नजिक नजिक हुन्छन तर मनहरू टाढा टाढा हुन्छन, गाउँमा घरहरू टाढा टाढा हुन्छन तर मनहरू नजिक नजिक हुन्छन ।
प्रयाश गर्ने हो भने, म चाँही कसो केही बन्न नसकुला र ? 100)सफलताका दश शत्रहरु
Prevयस्तो लक्षण देखिए हुनसक्छ छालाको क्यान्सर
Nextताप्लेजुङमा हिउँ पर्ने क्रम वर्सेनि घट्दै